Yakatumirwa ne Tranquillus | Feb 10, 2021 | Pamusoro pewebhu
Nguva yekuwedzeredza: akagovana mutoro weuchapupu
Iko kuremerwa kweuchapupu hwekuvapo kweawavhawidhi haingove pamusoro pemushandi chete. Mutoro weuchapupu unogoverwa newaunoshandira.
Nekudaro, kana paine kupokana pamusoro pekuvapo kwemaawa ekuwedzera, mushandi anopa, mukutsigira chikumbiro chake, ruzivo rwakakwana zvakakwana nezvemaawa asina kubhadharwa aanoti akashanda.
Izvi zvinhu zvinofanirwa kubvumidza mushandirwi kuti apindure nekugadzira zvinhu zvake.
Vatongi vekutonga vanoumba kutongwa kwavo vachifunga nezvese zvinhu.
Nguva yekuwedzeredza: zvakakwana zvakakwana zvinhu
Mukutonga kwa Ndira 27, 2021, Dare reCassation rakangojekesa pfungwa ye "zvakakwana zvakakwana zvinhu" zvinoburitswa nemushandi.
Muchiitiko chakasarudzwa, mushandi akabvunza kunyanya kubhadhara kweawa. Kuti aite izvi, akaburitsa chirevo chemaawa ekushanda aakaratidza kuti apedza panguva iri kutariswa. Huwandu uhwu hwakataurwa zuva nezuva, nguva dzekushandira uye kupera kwebasa, pamwe neyakagadzwa ayo ehunyanzvi nezvakataurwa nezvechitoro chakashanyirwa, huwandu hwemaawa ezuva nezuva uye huwandu hwevhiki.
Mushandirwi anga asina kupa chero ruzivo mukupindura kune izvo zvakagadzirwa nemushandi ...
Uchapupu hwenguva yekuwedzera: mushandi haafanire kuratidza chero mabhureki July 10th, 2021Tranquillus
VERENGA Mvura Inotakura Zvirwere Zvinotapukira
pashureKukadzi 9, 2021 Kubatanidza shanduko: chishandiso chitsva chekufambisa kwehunyanzvi Transco chishandiso chinopa kudzidziswa kwevashandi mukudzidzirazve kukudziridza zvikamu zvezviitiko, kana ivo vachishandiswa muzvikamu mune kuderera kwehupfumi.
zvinoteveraNatsiridza yako yekunyora maitiro: zvine musoro zvinongedzo
Kukadzi 25, 2021 Maitiro ekuronga yemagariro hurukuro pamusoro pekudzidzisa? Panyaya yekudzidziswa basa, vashandirwi vanosungirwa zviri pamutemo kutevedzera zvisungo zvakati wandei.
Izvo zvekutanga zveGoogle Sheets
Basa repasina: mitengo inoshanda muna Kubvumbi